Stratus | Saadaasha Shabakadda
A. Esteban | | Sawirro, Saadaasha hawada, Daruuro
Dib-u-eegistayada noocyada kala duwan ee daruuraha waxaan bilaabaynaa inaan ku sharaxno munaasabaddan Stratus ama Strata, kuwaas oo ka mid ah labada hiddo ee loo kala saaray daruuro hooseeya. Waxaa lagu sifeeyay inay yihiin lakab daruur ah oo guud ahaan cirro leh, oo leh saldhig isku mid ah, oo ay ka soo dhici karaan qulqulaya, baraf baraf ah ama cinarra. Marka Qorraxdu ka dhex muuqato lakabka, dulmarkeeda ayaa si cad loo kala saari karaa. Daruurahaani waxay mararka qaar u muuqdaan qaab shilal ah (fractus), oo ka hooseeya daruuraha kale.
Stratus waxaa sida caadiga ah laga helaa inta u dhexeysa 0 iyo 300 m dhulka hoostiisa waxayna ka kooban yihiin dhibco yar yar oo biyo ah inkasta oo heerkulka aad u hooseeya ay ka koobnaan karaan waxyaabo yaryar oo baraf ah. Waxay ku samaysan yihiin saamaynta isku dhafka ah ee qaboojinta lakabyada hoose ee jawiga iyo kacsanaanta dabaysha awgeed. Caadi ahaan waxay ku samaysan yihiin dhulka, waayo shucaaca habeen ama by xushmad hawo yara diiran dhulka qabow inta badweynta dusheeda, qaboojinta badanaa waa xalaal.
Stratus oo samaynaya "bad daruuro ah"
Waxay soo saaraan ceeryaamo haddii ay la siman yihiin dusha sare. Stratus fractus wuxuu u samaysan yahay daruuro siyaada ah (pannus) oo ka hooseeya Altostratus, Nimbostratus, Cumolonimbus iyo Uruurinta Degmooyinka. Markay soo saaraan fogs badanaa waxay la xiriiraan cimilada anticyclonic halka markii ay ka soo muuqdaan hoosta Altostratus ama Nimbostratus ay la xiriiraan Jabhada Diiran. Waxay sidoo kale u muuqdaan kuwo ku hoos jeexan Cumulonimbus, duufaan ama roob da'aya.
Waa inaan lagu qaldin Altostratus ama Nimbostratus, kuwani waxay leeyihiin muuqaal "qoyan", halka Stratusku ay leeyihiin muuqaal "qalalan". Roobab ka da 'Stratus Aad bay u daciif tahay iyo 'Nimbostratus' waa mid dhexdhexaad ah, sidaa darteed waa astaamo kale oo takoorid ah.
Haddii la sawiro iyagoo soo saaraya ceeryaamo, fiiri waxyaabaha tixraaca ah sida geedaha, dhismayaasha ama meelaha sare ee dhulka. Iyagu waa kuwo xiiso leh in la sawiro haddii ay muuqdaan ka hooseeya Nimbostratus, oo ay jeexjeexaan roob ama baraf.
Laba nooc (nebulosus iyo fractus) iyo saddex nooc (opacus, translucidus, undulatus) ayaa laga aqoonsan yahay Stratus-ka.
Macluumaad dheeraad ah - Nimbostratus, Altostratus
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha Shabakadda » Sawirro » Stratus
Tiirarka iftiinka, saameyn iftiin qurux badan